3rd November 2019 by Barre Leave a Comment
Ugu horeyn dhamaan wixii dhacay kalfadhigii 45 Golaha wakiiladda Puntland ka hor ayaa waxaa bilawday warar iska soo horjeeda oo baraha bulshada iyo saxaafadda madaxa banaani qorayeen oo ahayd in marka kal fadhiga furmo uu jiri doono mooshino Madaxadda sare Puntland laga keenayo qaar kood.
Taasi waxay keentay xasaasiyad iyo qorshayaal abaabulan in qola kasta ay la soo gasho Hoolka Golaha wakiiladda.
Kadib Furitaankii Madaxwaynuhu furay kal fadhiga waxaa dhacay in Gudomiyaha uu u ogolaaday Xildhibaanadda inay su’aalo waydiinkaraan Madaxwaynaha.
Xildhibaankasta wuxuu xaq u leeyahay inuu madaxwaynaha waydiiyo su’aalo laakiinse waxaa xusid mudan in waydintu ay tahay ku talagal waana mooshin in xildhobaanadu ay soo gudbiyaan Mashruuc lagu dalbanaayo Madaxwaynaha si uu ugu jawaabo Xildhibaanadda.
Sikastaba ha ahaatee Su’aashii uu xildhibaanku waydiiyay Madaxwaynaha Maysan ahayn mid wax lagu saxaayo dareen ahaan iyo qaabaka ay ugu wajahnayd oo keliya inay xilka banayaan.
Markaad Xildhibaan tahay waxaa la rabaa inaad la timaaddo xaqiiqooyin laga gaabiyay(Facts), Tusaale Bil hebel Mushaar lama qaadan , Magaalo hebel waa lala wareegay ama amnigeedii waa xumaaday oo intaas oo qarax ama dhib ayaa ka dhacay midana ma dhicin.
Balse arinta ka sii daran waxay ahayd Falcelintii Madaxwaynaha xanaaqii iyo ugu damayntii inuu hoolka isaga baxay usagon fasax ka helin Gudoonka oo uu Xaruntiisa Joogay.
Su’aasha uu xildhibaanku waydiiyay Madaxwaynaha in laga dheehankaro nooc ka midda tiirarka Faldenbiyeed waa arin Falaqaynteeda leh, balse waxaa la fiirinayaa Xeer hoosaadka golaha in xildhibaanku xaq u leeyahay intuu yiri iyadoon la siyaasadaynayn.
Talaabooyonkii Xeer Ilaalinta Puntland ay qaaday, runtii Xeer Ilaalinta waa ilaliyaha sharciga hadii fal-denbiyeed dhacona cidna ugama haybaysato waxaana ufuran talaabooyinka iyo masuuliyaadka ku xusan Qod.12-69- 70-71 -72 ee Xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo Qod 8 Ee Xeerka Nidaamka Garsoorka iyo Masuuliyaad kale oo baddan ilaa gudashada waajibaadkiisa.
Waxaan maqlayaa warar sheegaya in Madaxwaynaha Cafis u fidiyay Xildhibaankii marka kowaad Madaxwaynaha maahan Dacwo ooge mana cafinkaro dalabka Xeer Ilaalinta ugudbisay Golaha wakiiladda.
Waxaa xusid mudan inaysan wali meesha ka dhicind Xildhibaan la dacwayay, maxaa yeelay dastuurka waxaa ku qoran inaan Xildhibaanka dacwo ciqaaba lagu dhaqaajinkarin hadaan xasaanadda laga qaadin.
Xeer Ilaalinta waxay soo qortay Codsi Codsigana waa la diidi karaa ama waa la yeelikaraa.
Cafinta madaxwaynaha waa marka qof Denbi lagu xukumo oo waliba shuruudo leh sida inuu wanaagsanaaday ,inuu sadex meelood oo lambo meelood qaatay Xukunkiisa, inuusan ahayd denbiyaddaXuduud ah.
Waxaan aad u arkayaa Xildhobaano ku cel celinaayo Dacwadda Xildhibaan, Dacwadu waxay bilaabataa Xasaanad ka qaadista ka dib codsigii ayay Xeer ilaalintu ka laabatay.
Cuskashadda Xafiiska Xeer Ilaalinta Qodobadda 111 iyo 112 ee Xeerka Habka Ciqaabta waxaa la cuskadaa kadib marka la sameeyo Waraaqdda Eedaynta si waafaqsan Qod.71 ee Xeerka habka ciqabta.
Madaama uu Gal -ka furnaa Xeer Ilaalintuna rabtona inay xirto waxay ahayd inay cuskato Qod.72 oo ah Gal-xirid.
Ugu damayntii waxaan codsanayaa in aan loo hogaansamin dareen qof ama hay’ad ee waxaa muhiima in loo hogaansamo sharciga oo keliya.
Xildhibaanadda iyo saamilayda Sharciyadda waxaan ka codsanayaa inay shuruucdda akhriyaan kadibna ay dhaqan geloyaan.
Sharciga ayaa ka sareeya Qof walba
8th September 2019 by admin2 Leave a Comment
Haweeney 73 sano jir ah oo ku nool gobolka Koonfurta dalka Hindiya ee Andhra Pradesh ayaa dhashay laba caruur oo mataano ah.
Caruurtan oo gabdha ah ayay dhaqaatiirtu shegeen inay aaminsan yihiin in sababtu ay tahay in la bacrimiyay oo shahwada ninkeeda lagu beeray minka haweeneyda.
Haweeneyda caruurta dhashay oo lagu magacaabo Mangayamma Yaramati ayaa sheegtay in iyada iyo seygeyda oo da’diisu ay tahay 82 jir ay marwalba ku han-weynaayeen inay caruur helaan, balse taas aysan horay u dhicin.
“Aad ban ugu faraxsanahay,” ayuu yiri seygeyda Sitarama Rajarao oo la hadlayay BBC-da saacado un kadib markii ay caruurtu dhasheen.
Hasayeeshee maalin kadib, ” ayaa waxaa ku dhacay xanuunka jeex qalalaka ama Stroke loo yaqaano, waxaana haatan lagu daweynayaa isbitalka.
“Waxba gacanta noogu ma jira anaga,wixii qoran way dhacayaan, waxwalba Allaah ayaa gacanta ku haya”, ayuu raaciyay oo mar wax laga weydiiyay cida xanaaneyn doontaa haddii ay wax dhacaan, maadaama labadooduba ay da’da ka daba timid.
Lamaanahan oo aan horay wax caruur ah u helin ayaa sheegay in tani ay muhiim u tahay noolashooda, maadaama ay dhaga-hadal kala kulmeen bulshada ku nool tuulada ay degan yihiin.
Yaramati ayaa sidoo kale sheegtay in loogu yeeri jiray haweeneydii aan caruurta lahayan, taas na ay xanuun badan ku reebtay iyada iyo seygeeda.
“Dhowr jeer ayaanu isku daynay in aan caruur helno oo dhaqaatiir badan ayaanu aragnay, balse nooma aysan suurta gelin, hadda oo aan helnay na waa farxadda ugu weyn noolasheyda”, ayay tiri.
Gabdhaha mataana ayaa ku dhashay qaab qalliin ah, taas oo la sheegay inay tahay mid caadi ah, maadaama hooyada ay tahay qof waayeel ah.
Arrintan oo kale ayaa waxaa ay horay uga dhacday dalka Hindiya sanadkii 2016-ka, xiligaas oo haweeney 70 sano jir ah ay dhashay wiil.
16th February 2019 by A.lahi Leave a Comment
ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in duleedka degmadaasi ay howlgallo ballaaran ka wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Saraakiisha hoggaamineysa howlgalkan oo u warammay Goobjoog waxay sheegeen iney ku raad joogaan xubno ka mid ah Al-shabaab oo weerar ka geystay deegaanka Tixsiile ee Sh/hoose.
Sidoo kale, saraakiishan ayaa sheegay iney howlgalkan kaga hortagayaan weeraro kaga yimaada dhanka Xarakada Al-shabaab.
Weli lama sheegin cid lagu soo qabtay howlgalkan, iyadoo weli ciidamada ay baarayaan xaafadaha ku yaalla halkaasi.
DOWLADDA KENYA OO SHEEGTAY IN AL-SHABAAB AY BILLOWDAY QORSHAYAAL HALIS AH
24th December 2017 by Barre Leave a Comment
Sirdoonka dalka Kenya ayaa sheegay in Xoogagga Al-shabaab ay dajiyeen Qorshayaal halis ah oo dhanka Sirdoonka ah, iyagoo adeegsanaya haween qurux badan.
Joseph Kanyiri oo ka mida saraakiisha Sare ee Kenya ayaa sheegay in Al-shabaab ay diyaariyeen haween ka tirsan kooxda oo aad u qurxoon, kuwaas oo uu sheegay inay geyn doonaan gobolka Somaalidu degto ee Waqooyi-bari Kenya.
Sidoo kale, Joseph ayaa xusay in hablahan ka tirsan Kooxda Al-shabaab ay doonayaan in xariir saaxiibtinimo ay la yeeshaan ciidamada Kenya si ay u helaan xog dhanka sirdoonka ah.
Isagoo sii hadlaya sarkaalkan ayuu sheegay in horay kooxda Al-shabaab ay tallaabadaan oo kale u sameeyeen, isla markaana ay dumar u adeegsadeen basaasnimo si ay gudaha Kenya xog uga helaan.
Dhanka kale, Al-shabaab ayaa weeraro isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah ka geystay Gobolka Waqooyi-bari ee Kenya, Waxaana weerarkii ugu saameynta badnaa uu ahaa weerarkii ka dhacay Jaamacadda Gaarisa sanadkii 2015-kii.
Ugu dambeyn, Kooxda Al-shabaab ayaan ka hadlin hadalka sarkaalkan uu ku sheegay in Al-shabaab ay doonayso inay haween adeegsato si ay weerarro uga geystaan gudaha dalka Kenya.
RABSHADAHA U DHEXEEYA SOOMAALIDA IYO OROMADA OO SAAMEEYAY BAARLAMAANKA ITOOBIYA
23rd December 2017 by Barre Leave a Comment
Xildhibaannada kasoo jeeda Amxaarada iyo Oromada ayaa Qaadacay kulanka Baarlamaanka dalka Itoobiya, iyagoo ka careysan rabshadaha u dhexeeya Qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada.
Mudanayaashu waxay sheegayaan inaysan jirin sabab uu Baarlamaanka u kulmo illaa Ra’iisul Wasaare Hailemariam Desalegn uu ka bixinayo sharaxaad ku saabsan qalalaasaha u dheexeeya qowmiyadaha ee dalka ka taagan.
Sidoo kale, Amxaarada iyo Oromada waxay muddo ka dibadbaxayeen waxay ku tilmaameen faquuqa siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee ay sheegeen in si gaar ah iyaga loogu hayo.
Muddo bilo ah waxaa socdo dagaal dad badan ay ku dhinteen oo u dhexeeya Qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa in ka badan 60-qof oo Soomaali ah lagu dilay Gobolka Oromada ee Itoobiya.
Dhanka kale, Arbacadii lasoo dhaafay ayaa Xisbiga EPRDF ee talada wuxuu ku eedeeyay Golihiisa Fulinta inay awoodi waayeen inay rabshadaha dalka taagan ay xal u helaan.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya, Hailemariam Desalegn oo ka hadlay TV-ga dalkaasi ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah lagu laayay gudaha Xero Booliis oo ku taalla Gobolka Oromada.
Inkastoo Desalegn uusan sheegin tirada Soomaalida ah ee la dilay, ayaa la sheegayaa in tirada la laayay ay u dhaw yihiin 100-qof, wuxuuna Desalegn sheegay in dhibaato badan ay ka dhacday goobtaas.
Ugu dambeyn, Ra’iisul Wasaaraha Dalka Itoobiya ayaa xaqiijiyay in guddi loo saaray arrinta si ay u soo baaraan ka dibna wuxuu sheegay in waxa sharciga uu ka qabo lagu qaadi doono kuwa dambiga uu ku cadaado.
MADAXWEYNAHA PUNTLAND OO DIGREETO MAGACII KAGA BEDELEY WAKAALADDA WARARKA DAWLADDA PUNTLAND.
21st December 2017 by A.lahi Leave a Comment
Digreeto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo magacii lagaga bedelay Xeer Madaxweyne Lr-151 December, 20, 2017 Wakaaladda Wararka dawladda Puntland.
Markuu arkay: Tala soo jeedinta Agaasimaha Guud ee Wakaaladda Wararka dawladda Puntland,
Waxaa magaca Wakaaladda Wararka dawladda Puntland loo bedelay Wakaaladda Warbaahinta iyo Horumarinta Teknoolajiyadda dawladda Puntland.
Sacuudiga oo ka carooday sawiro ay sameeyeen reer Aljeeriya
Dowlada Sacuudiga ayaa si weyn uga carootay sawiro ay gacanta ku sameeyeen taageerayaasha mid kamid ah kooxaha kubada cagta ee Aljeeriya oo Boqorka Sacuudiga Salmaan la barbardhigay Donald Trump-ka Maraykanka.
Sawiradan oo si weyn dalalka Carabta loogu baahiyey baraha internetka ayey ka carootay xukuumada Sacuudiga oo sheegtay inay jawaab ka bixin doonto arrintan.
Xiisadan ayaa kusoo beegantay xili Isniintii shalay uu dalka Aljeeriya tagay wafdi ka socda Sacuudiga oo uu hogaaminayo Guddoomiyaha Golaha Shuurada Sacuudiga Cabdallah Bin Maxamed Ibrahim al-Sheikh.
Wadanka Sacuudiga oo ah saxiibka ugu weyn ee Maraykanka ku leeyahay dalalka Carabta ayaa lagu eedeenayaa inuu qeyb ka yahay siyaasada qalafsan ee Maraykanka oo ku aadan Bariga Dhexe gaar ahaan qadiyada Falastiin.